Akhriso Dowladaha Mareykanka Iyo Pakistan Oo Xaalad Adag Ka Dhex Qaraxday. – Bogga Calamada.com
Akhriso Dowladaha Mareykanka Iyo Pakistan Oo Xaalad Adag Ka Dhex Qaraxday.
January 2, 2018 9:23 am Views: 133
Hoggaamiyaha Cunsuriga ah ee Wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa weerar kulul oo Afka ah ku qaaday dowladda Pakistan oo 16-kii sanadood ee lasoo dhaafay isbahaysi ka dhanka ah ‘Argagaxisada’ la aheyd Mareykanka.
Trump oo Farrimihiisi ugu horreeyay sanadda 2018 ku faafiyay bartiisa Twitterka ayaa dowladda Pakistan ku eedeeyay dhagar iyo meermeerin ay ku sameysay Mareykanka.
Wuxuu sheegay in dowladda Pakistan ay bil walba lacago malaayiin dollar ah ka qaadaneysay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka balse aysan si wanaagsan uga gacansiin la dagaallanka jamaacaadka Jihaadiga ah.
“Mareykanku si axmaqnimo ayuu Pakistan usiiyay in ka badan 33 Bilyan oo dollar 15-kii sanadood ee u dambeeyay iyaguna nama siin wax aan ka aheyn been iyo dhagar iyagoo hoggaamiyaasheena u arkayay dabaallo” ayuu yiri Trump.
Mareykanka ayaa Pakistan ku eedeeyay in ay hoy siiso wax ay ugu yeereen Argagaxiso oo ay ula jeedaan xarakada Islaamiga Taliban Afghanistan,
“Pakistan waxay hooy siisay Argagaxisada aan kasoo Eryanay Afghanistan wax macluumaad ah oo ay nasiiyeen majiraan marka laga reebo waxyar oo aan badneyn” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Trump.
Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Pakistan oo ka jawaabay warka kasoo yeeray Hoggaamiyaha Mareykanka ayaa sheegay in aysan waxba kajirin warka Trump islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay soo bandhigaan wixii dhax maray iyaga iyo Mareykanka.
Khuwaajah Asif ayaa yiri ” Pakistan waxay diyaar u tahay in ay soo bandhigto wax isdhaafsigii shaacsanaa ee nagala dhaxeeyay Mareykanka”.
Wasiirka difaaca Pakistan ayaa isna sheegay in warka kasoo yeeray Trump uu yahay mid been abuur ah isagoo sheegay in Fashilka melleteriga Mareykanka kasoo gaaray Afghanistan uu sabab u yahay eedeymaha beenta ah ee ka imaanaya Washington “Pakistan Mareykanka kama helin wax aan ka aheyn xummaan iyo kalsooni darro”.
Dowladda dabadhilifka Pakistan waxay aheyd dowladdii 2-aad ee Mareykanka ku taageertay duullaankii Afghanistan lagu qaaday sanaddii 2001, melleteriga Pakistan ayaa la ogaa xasuuqii uu ugeystay dadka muslimiinta ah isagoo raalli gelinayay G.W.Bush madaxweynihii hore ee Mareykanka.